भोलि श्रीकृष्णजन्माष्टमी किन बसिन्छ रातभरी जाग्राम ? कारण एस्तो छ जानिरखौ ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
भोलि श्रीकृष्णजन्माष्टमी किन बसिन्छ रातभरी जाग्राम ? कारण एस्तो छ जानिरखौ !
Published : 10 August, 2020 7:48 pm
हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ देशभर मनाइन्छ । यो वर्ष भोली अर्थात मंगलबार देशभरी भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाइन्छ । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भएको हो । र सोही दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्री’ भनिन्छ ।
कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डवहरूमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयम् उहाँका मुखारविन्दबाट व्यक्त ‘श्रीमद्भागवतगीता’ हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ । यो ग्रन्थ धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेको छ । बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना, कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको थियो । यसै उपलक्ष्यमा देशभर विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने चलन छ ।